Gịnị ka Chineke chọrọ n'aka anyị? Ime obere ihe nke ọma… kedu ihe nke ahụ pụtara?
Ntụgharị asụsụ biputere na Ntụgharị uche ndị Katọlik kwa ụbọchị
Gịnị bụ “obere ọrụ” nke ndụ? O yikarịrị ka ọ bụrụ na ị jụrụ ọtụtụ ndị dị iche iche si n'akụkụ niile nke ndụ ajụjụ a, ị ga-enwe azịza dị iche iche. Ma, ọ bụrụ na anyị echebara ihe Jizọs kwuru echiche, o doro anya na otu n’ime ihe ndị bụ́ isi o kwuru bụ iji ego eme ihe.
Ọtụtụ ndị na-ebi ndụ dị ka a ga-asị na inweta akụ na ụba bụ ihe kacha mkpa. E nwere ọtụtụ ndị na-arọ nrọ ịba ọgaranya. Ụfọdụ na-egwu lọtrị mgbe niile n'olileanya a na-atụghị anya ya nke imeri nnukwu. Ndị ọzọ na-etinye onwe ha n'ịrụsi ọrụ ike n'ọrụ ha ka ha nwee ike ịga n'ihu, nwetakwuo ego, na inwekwu obi ụtọ ka ha na-abawanye ụba. Ndị ọzọ na-arọ nrọ mgbe nile banyere ihe ha ga-eme ma ọ bụrụ na ha bara ọgaranya. Ma site n'echiche nke Chineke, ndịAkụ na ụba ihe bụ obere ihe na-adịghị mkpa. Ego bara uru n'ihi na ọ bụ otu n'ime ụzọ nkịtị anyị na-esi elekọta onwe anyị na ezinụlọ anyị. Ma, ọ dị ntakịrị mkpa ma a bịa n’ihe gbasara echiche Chineke.
Nke ahụ kwuru, ịkwesịrị iji ego gị mee ihe nke ọma. Anyị kwesịrị ịhụ ego naanị ka ụzọ isi mezuo uche Chineke zuru oke. Mgbe anyị na-arụ ọrụ ịnapụ onwe anyị na oke ọchịchọ na nrọ nke akụ na ụba, na mgbe anyị na-eji ihe anyị nwere dị ka uche Chineke, mgbe ahụ omume a n'akụkụ anyị ga-emeghe ụzọ nke Onyenwe anyị inye anyị n'aka nke ukwuu. Kedu ihe bụ "ọtụtụ ihe ọzọ?" Ha bụ ihe gbasara mmụọ nke metụtara nzọpụta ebighị ebi anyị na nzọpụta nke ndị ọzọ. Chineke chọrọ inyefe gị nnukwu ọrụ nke iwu Alaeze ya n’Ụwa. Ọ chọrọ iji gị kesara ndị ọzọ ozi nzọpụta Ya. Ma nke mbụ ọ ga-echere gị ka ị gosipụta ntụkwasị obi na obere ihe, otu esi eji ego gị eme ihe nke ọma. Ma mgbe ahụ, ka ị na-eme uche Ya n'ụzọ ndị a dị ntakịrị mkpa, Ọ ga-akpọ gị n'ọrụ ka ukwuu.
Tụgharịa uche taa n'eziokwu na Chineke chọrọ ihe ukwu n'aka gị. Ebumnuche nke ndụ anyị niile bụ ka Chineke jiri ya mee ihe n'ụzọ dị ịtụnanya. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe na-amasị gị, mgbe ahụ jiri nlezianya mee obere ihe ọ bụla nke ndụ gị. Gosi ọtụtụ obere omume obiọma. Gbalịa na-echebara ndị ọzọ echiche. Buru mkpa nke ndị ọzọ ụzọ tupu nke gị. Na-agba mbọ iji ego ị nwere maka otuto Chineke na dịka uche Ya si dị. Ka ị na-eme obere ihe ndị a, ị ga-amalite ịtụ n’anya ka Chineke ga-esi malite ịtụkwasị gị obi karịa na, site na gị, ihe ukwu ga-eme nke ga-enwe mmetụta ebighi ebi na ndụ gị na ndụ nke ndị ọzọ.
Biko nyere m aka ịkekọrịta ọrụ a site n'ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye uche gị dị nsọ n'ụzọ ọ bụla. Ka m na-agbalị ijere gị ozi n’ihe ndị dị nta ná ndụ, a na m ekpe ekpere ka i nwee ike iji m mee ihe ndị ka ukwuu. Ndum bu nke Gi, Onye-nwe-ayi. Jiri m ka ị chọrọ. Jisus ekwerem na Gi.